जानकारी Archives - Khasokhas Weekly
प्रतियोगिता नहुंदै विवादमा मिसेस नेपाल यूके
यही २ जुन शुक्रबार लन्डनमा तय गरिएको मिसेस नेपाल यूके प्रतियोगिता २०१७ फिनाले अगावै विवादमा परेको छ । शुरुमा निशुल्क भनिएपनि पछि प्रतियोगीसंग विभिन्न शीर्षकमा रकम माग्ने अनि फिनाले हुनु एक दिनअघिसम्म पनि प्रशिक्षण नभएपछि सहभागी आक्रोशित भएका हुन् । एक प्रतियोगीका अनुसार, आयोजक लन्डन फेसन हाउसले प्रतियोगीसंग गावन वापत जनही ८० पाउण्ड र टिसर्टको …
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति भए राष्ट्रिय सहमतिको नभए बहुमतीय सरकार आफ्नै नेतृत्वमा गठन गर्ने दाबी गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सहमतिय सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व भएका दलहरुको सर्वदलिय बैठक आव्हान गर्नुभएको हो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित भएपछि बैठक ठोस निष्कर्ष आएन । …
बिस्केट जात्राको लिंगो भाँचियो, एकको मृत्यु, अनिष्टको संकेत !
-दीपेन्द्र ढुंगाना (सबै तस्विर) भक्तपुरमा मनाइने बिस्केट जात्राको लिङ्गो उठाउने क्रममा लिङ्गो भाचिँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । ज्यान जानेमा अन्दाजी ३४ वर्षका एक व्यक्ति रहेको र पहिचान हुन नसकेको महानगरीय प्रहरी परिषर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता कृष्ण प्रसाईले बताए । लिङ्गो भाचिएर घाइते भए लगत्तै भक्तपुर अस्पताल ल्याइए पनि अस्पताल ल्याउनु अघि नै …
मेक्सिकोमा भेटियो २५० जनाभन्दा धेरैको सामुहिक चिहान
सेन्ट्रल मेक्सिकोमा २५० जनाभन्दा धेरैको अस्थीपञ्जर सहितको सामुहिक चिहान भेटिएको छ । उनीहरु लागुऔषध गिरोहसँग सम्बन्धित भएको अधिकारीहरुले आशंका गरेका छन् । सामुहिक चिहान मेक्सिकोको भेराक्रुज राज्यमा भेटिएको हो । मारिनेहरु को हुन् भनेर पहिचान गर्न निकै कठिन भएपनि अधिकारीहरुले अस्थीपञ्जहरु हराइरहेका व्यक्तिका सुचनाहरुसँग म्याच गराइरहेका छन् । लागु औषधको कारोबारका क्रममा मेक्सिकोमा कैयनको ज्यान …
अमेरिकी भिसाका लागि १४ टिप्स
अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल छ । यो अवस्थामा अमेरिकी सरकारले जारी गर्ने भिसा सन्दर्भमा के होला भन्ने चासो सबैतिर छ । तर भिसाका गाइडलाइनहरु भने परिवर्तन गरिएको छैन । दूतावासहरुले पुरानै गाइडलाइन अनुशार भिसा जारी गरिरहेका छन् । काठमाडौंमा रहेको अमेरिकी दूतावासका कन्सुलरले दिनुभएका यी टिप्सहरु पालना गरेमा भिसा पाउन सहज हुनसक्छ । …
१२ करोडको कुकुर !
आयरल्यान्डको प्रहरीले एउटा सिकारी कुकुर चोरेको आरोपमा चारजनालाई पक्राउ गरेको छ । यो कुकुरको मूल्य १० लाख युरो अर्थात् करिब १२ करोड नेपाली रुपैयाँ हो । क्लेयर्स रकेट नामको यो कुकुरलाई केही पहिले टिपरेरी काउन्टीको गोल्डन नामको ठाउँबाट चोरिएको थियो । त्यतिवेला यो कुकुर आफ्नो प्रशिक्षकसँग थियो । यो चोरीको तुलना सन् १९८३ मा भएको …
४ स्टेपमा आँखा नशालु
कतिपय युवतीका आँखा हेर्दै नशालु लाग्छन् । यस्ता आँखा भएका युवतीले सबैको नजर तान्छन् । तर, मेकअप गरेर सामान्य आँखालाई पनि नशालुपन दिन सकिन्छ । तपाईंका आँखा सामान्य छन् र सबैको नजर खिच्ने बनाउन चाहनुहुन्छ भने गाजल लगाउँदा केही स्टेप पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्युटिसियन एलिसा लेप्चाले स्टेप सिकाएकी छिन् : एलिसा लेप्चा ब्युटिसियिन स्टेप …
कुनै पनि नयाँ स्थान परिवेश या कार्यक्रममा सेल्फी खिच्नु सामान्य भइसकेको छ । मोबाइलबाट सेल्फी लिँदै तुरुन्तै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर लाइक बढाउने ध्याउन्नमा धेरै हुन्छन् । अहिलेको युवा पुस्तामा यस्तो प्रवृति अत्यधिक पाइन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा लिएको सेल्फी आफूले चाहेजस्तो नआउन सक्छ । किन हुन्छ यस्तो ? आफ्नो चाहनाअनुसार राम्रो सेल्फी खिच्न अपनाउनुपर्ने …
एसाइलम स्वीकृत गर्ने न्युयोर्कका टप ‘नौ नरम न्यायाधिस’
-किशोर पन्थी सबैभन्दा धेरै नेपालीका एसाइलम स्वीकृत गर्ने न्यायाधिस मार्गारेट विगत ६ बर्षको अवधिलाई विश्लेषण गर्दा अमेरिकामा शरणार्थी बनेर बस्नका लागि एसाइलम आवेदन दिनेमा नेपालीहरु सातौं नम्बरमा छन् । अर्थात् अमरिकामा विश्वका विभिन्न देशका व्यक्तिले शरणार्थीका लागि आवेदन दिने गरेकोमा त्यसमध्ये २ दशमलव २ प्रतिशत नेपालीहरु छन् । आर्थिक बर्ष २०११ देखि आर्थिक बर्ष २०१६ …